စတုဒီသာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » စတုဒီသာ
Posted by uncle gyi on Apr 15, 2015 in My Dear Diary | 27 comments
တ မှတ် ရ အ
စတုဒီသာကျွေးတာကိုဘယ်သူကဘယ်ခေတ်ကစခဲ့လဲမသိဖူးဗျာ
ဒါပေမဲ့လူမျိုးဘာသာမရွေးစားချင်သူဝင်စား
၆၄ လမ်းဘက်ရောက်တော့ကြာဇံကျော်ကျွေးနေတာတွေ့ရလို့
အကြတ်နေ့၆၄လမ်းဘက်ကြာဇံကြော်စတုဒီသာကျွေးမှုမှတ်တမ်းများ
တပျော်တပါးးး မြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာ
တောက်ကျီးကျယ်ဒယ်တော့ ပျောနဲ့ပေါ့ဗျာ.. ဒါပေသိ လူပေါင်းတစ်ရာ့တစ်ပါး.. တစ်ခါသုံးပုဂံ၊ ခွက်လေးတွေနဲ့ ကျွေးစေချင်တယ် ဘယ်လောက်မှ မရှိပါဘူး
သေချာ ပြန်ဆေးသလားမသေချာတဲ့ ဆိုင်တွေမှာတောင် စားရသေးတာပဲဟာ။
အလှူမှာ ကူမဲ့သူက ပိုများမှာပါ..
ဆိုင်မာကျ မြင်ရ၀ူးလေ.. ဒမာက မြင်ရဒယ်
နာ့ စတုဒီသာကျ နိ ကို ခေါ်ဝူးးး
မီယုံမီရှိနဲ့ ဝါး ရေ့။
ဒီတစ်ခေါက် လေယာဉ် နှစ်ဆင့်မှာ
ယူကေ (အထွက်/အဝင်) ဘက် မှာ ကျွေးတာက တကဲ့ စတီး ဇွန်း ခရင်း ဓား တွေ နဲ့ ကျွေး ပါတယ်။
မြန်မာ (အထွက်/အဝင်) ဘက် မှာ ကျွေးတာက တစ်ခါသုံး ပလပ်စတစ် ဇွန်း ခရင်း ဓား တွေ နဲ့ ကျွေးပါတယ်။
ဘာကြောင့်ဆိုတာ စဉ်းစားသင့်/မသင့် စဉ်းစားနေဆဲ။ lol:-)))
လေယဉ်ပေါ်တွေမာတော့ ကျနော်မှတ်မိတဲ့ တချို့ အဲလိုင်းတွေ စတီးဇွန်းခရင်းသုံးကြပါတယ်…
ကျနော်တို့ ရန်ကုန် IT လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဆိုရင်လည်း လက်ဘက်ရည်ကြမ်းခွက်လေးတွေလာချရင် ရေနွေးစိမ်ထားပြီးသားကို စတီးညှပ်ကလေးတွေနဲ့ညှပ်ပီး လာချပေးတာဆိုတော့ သောက်ရတာ အမြဲစိတ်သန့်တယ်.. စိမ်တဲ့ ရေနွေးလှမ်းကျိလိုက်ရင်လည်း အငွေ့တွေထပြီး တကယ်ကြည်သန့်နေတာလေ…
စဉ်းစားသင့်/မသင့် စဉ်းစားပီး ပြန်ပြောဦးနော် အရီး..
စတုဒီသာ ပါဆိုနေမှ.. ကုလားစကား/စာကြီးကို..
အဲ့ဒိလို ​ကျွေးမဲ့အစား အခြား လိုအပ်​ချက်​​တွေ စုဖြည့်​ကြမယ်​ဆိုရင်​ဖြင့်​ အတိုင်းထက်​အလွန်​ ​ပျော်​စရာ ​လောက တစ်​ခုဖန်​တီးနိုင်​မှာ​ပေါ့ဗျာ
ဒီတစ်ခေါက် ကြာဆံကြော်မစားခဲ့ရတာ အခုမှ သတိရတယ်။
ဘယ်လိုမှ အရသာမတွေ့ တဲ့ ကိုရီးယား တို့ ထိုင်း စာ တို့ နဲ့ ဘဲ ငြိ နေတာများလို့။
အဘနီ ပြောတာ အင်မတန် သဘောကျတယ်။
စားပြီးရင် ပြီး သွားမဲ့ နေရာမှာ တခဏ အရသာခံဖို့ အချိန် နဲ့ ငွေလဲကုန်၊ လူလဲ ပင်ပန်း လုပ်လိုက်ကြရတာ။
တစ်ခြား တင်ကျန်မဲ့ နေရာ သုံးပါတော့လား။
ကျွန်မကိုသာ ပါဝါ ပေးရင် အစားအစာ တွေ ဘုန်းဘောလအော လုပ် နေတာ ကို လျှော့ချင်တယ်။
သူများ စတုဒီသာထဲ ဝင်ပြီး ဝီစိကိစ္စာ ပွါးနေတာ ခွေးလွှတ် အန်ကယ်ကြီး ရေ့။ :))
အရီး​ရေ ကျ​နော်​မြင်​သ​လောက်​​ပြောရရင်​မ​ကောင်းဘူးဗျ ။ သူတို့အ​ခေါ် ​နေပြည်​​တော်​ ​ကောင်​စီနယ်​​မြေထဲမှာတင်​ စုတ်​ပြတ်​​နေတဲ့ စာသင်​​ကျောင်း​တွေ အများကြီး ။ တစ်​ချို့​ကျောင်း​တွေ ဆရာမလုံ​လောက်​ဖူး ။ မြို့​ပေါ်နဲ့ ဆက်​သွယ်​​ရေးလွယ်​ကူတဲ့ ရွာ​တွေမှာပဲ ရာထူး မယူပဲ ကပ်​သပ်​​နေကြတဲ့ သူ​တွေများလို့ ။ ​နောက်​​ဆေးရုံ​တွေ ။ ​နေ၀န်းနီ ​နေတဲ့ တပ်​ကုန်း​ဆေးရုံ အဆိုးဆုံး ။ ပတ်​တီးကအစ ၀ယ်​ရတယ်​ ။ ဒါ​တွေ ​ဟောင်း​လောင်းထားပြီး ​ပျော်​​ရေးရွှင်​​ရေး​တွေမှာ အားသွန်​ခွန်​စိုက်​ အကုန်​အကျခံ​နေတာ မြင်​ရ​တော့ ကိုယ်​ကိုကိုယ်​ ​တွေးမိတယ်​ ။ ငါ နိုင်​ငံမှားပြီး လူဖြစ်​လာတာလားမသိပါဘူးကွာ အဲ့​လောက်​ကို စိတ်​ကုန်​​နေတာ အဟုတ်​
အဟုတ်ပြောတာ…။ ပျော်ရေးရွှင်ရေးမှာ..ငွေသုံးလုပ်အားသုံးတာဟာ..(လုပ်နိုင်ရက်နဲ့)အလုပ်မလုပ်သူတွေကို… စားဝတ်နေရေး..အကုန်ထောက်ပံ့နေရတာထက်တော့..အပုံကြီးမြတ်ပါတယ်..။
ကုသိုလ်ရမရ အာမခံရအောင် ဒဂျီးက ဘာကြီးလားးးး
(အစားအစာ တွေ ဘုန်းဘောလအော လုပ် နေတာ ကို လျှော့ချင်တယ်။)
ဒီနေရာမှာ ကိုယ်ကတော့ အစားသမားမို့လားမသိဘူး စတုဒိသာကို ကျွေးရတာလည်း ကြိုက်တယ်။
စားရတာလည်း ကြိုက်တယ်။ :p:
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကျော်က ကြက်သားက အသားဟင်းတွေထဲမှာတောင် ဈေးနည်းနည်းပိုကြီးတဲ့ခေတ်ပေ့ါ။
ကျမတို့အဆောက်အဦဆောက်တော့ ကြီးကြပ်ဖို့ ခေါ်ထားတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ (ပင်စင်စားပြီး အပြင်လုပ်လိုက်လုပ်နေတာ) ကြီးကို ဆိုင်မှာနေ့လည်စာဝင်စားတော့ ကြက်သားဟင်းနဲ့ကျွေးလိုက်တာ။
သူက ကြက်သားမစားရတာ နှစ်တောင် အတော်ကြာပြီပြောပြီး အားရပါးရစား၊
ကျေးဇူးတွေတင်ပြီး ကြုံတိုင်းပြောလို့ ကိုယ်တွေမှာလည်း ၀မ်းသာခဲ့ရတာ။
တခါတလေကျွေးတာပေမယ့် ဘ၀အတွက်အမှတ်တရဖြစ်ပြီး အားဖြစ်သွားစေနိုင်တာလည်း ရှိနိုင်တာမို့….
ခ၀ဲခြံမျက်မမြင်ကျောင်းကို သွားလှူ ကြတုန်းက မေတ္တာကိုပြသပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သတိရမိတယ်။
ဆီလည်းမများဖူးဆီလည်းကောင်းတယ် အရီးနဲ့ခင်ဇော်ရေ
အပျော်လေးနဲ့မှဒီလိုကျွေးမယ့်ပိုက်ဆံတွေစုပြီး
စတု= ၄/ ဒိသာ= မျက်နှာ လေ အန်ကယ်ကြီး။
အရပ် ၄မျက်နှာက လာတဲ့သူတွေ သိသိမသိသိ ကြွေးမယ်လို့ ရည်စူးထားတဲ့ အလှူပေါ့။
အလှူ ပေးသူတွေရဲ့ စိတ်ထားတတ်ရင် မြတ်ပါတယ်။
ကျမလည်း ဂေါက်ကလပ်ဝင်မို့ သူ့မှာ မလိုပဲ ကြွေးတဲ့ အလှူကို နှမျောတတ်နေတယ်။
အဲဒါ သူကြီး ဘရိန်ဝပ်ရှ် လုပ်တာခံထားရလို့ ဖြစ်မယ်။
(သင်္ကြန်မှာတော့ လည်ရင်းပတ်ရင်း ဗိုက်ဆာနေတဲ့သူတွေကို ကြွေးရတာ ဆိုတော့ လိုအပ်တယ်ပဲ ပြောရမလား သို့လော သို့လော)
အပေါ်က ကုလားစာရယ်လို့ရေးလိုက်တာက.. ဖေ့ဘုတ်က..အောက်ကစာကိုဖတ်ပြီး..သဘောတူမျှဇျာန်ဝင်သွားလို့ရေးလိုက်တာနော..။
အခွက်ကို အရိုက်ချင်ဆုံး တတ်ယောင်ကား စကားက အင်္ဂလိပ်သိမ်းမှ ဗမာတွေ ကုလားမြင်ဖူးပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က မုန့်တွေနာမည်လောက် ကုလားစကား မွေးစားကြတဲ့အပေါက် ပြောတဲ့ အကောင်မျိူးပဲ။ အရှေ့တောင်အာရှ တခွင်လုံး ဟိန္ဒူကုလားယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းတာပဲ။ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာစကား ဓလေ့ အနုပညာ အစားအသောက် အကုန်ပဲ။ ဒီကုလားက ကမ္မ၀ါဖတ်မယ့်ကောင်တဲ့…. ကုလားက ကမ္မ၀ါဖတ်တော့ ဘာထူးဆန်းလဲ။ ကမ္မ၀ါက ကုလားလို ရေးထားတာပဲ။ ဆန်းခရစ်ရော ပါဠိရော ကုလားစကားပဲ။ မြို့နာမည် မြစ်နာမည် ကုလားလို မှည့်ထားတာပဲ။ ဟိန္ဒူလို နှစ်ကူး ဟိန္ဒူလို မီးထွန်းပွဲလုပ်တာပဲ။ ဓမ္မသတ် ရာဇသတ်ကစလို့ လင်မယား အတူနေနည်းထိ တိုက်ရိုက်ကူးသလို ရေပက်တာ မီးထွန်းတာကို ကုလားနောက်တစ်ဂိုဏ်း ဗုဒ္ဓဘာသာထဲ ထည့်ယူ မော်ဒီဖိုင်း လုပ်တာပဲ။ အခု ကုလားဆို ဆဲတာက တဆင့်ခံ အသုံးချထားတဲ့ ဝေါဟာရပြဿနာ သက်သက်ပဲ။ အဓိက ပြဿနာက အစ္စလာမ်မုန်းအယူပဲ။ ဒါကို မျက်မှောက် ပြုရမယ်။ ဒါကို ဖြေရှင်းရမယ်။ အသားမဲလို့ ခွဲတယ်ဆိုတာ အစွန်းထွက် ပြဿနာပဲ၊ အရင်းအမြစ် မဟုတ်ဘူး။ အသားဖြူရင် လှတယ် မှတ်တတ်တဲ့ ဓလေ့ကိုက မဖြူသူတွေရဲ့ အလှစံ။ ဖြူတာကို ဖျော့တာကို အလှအနေနဲ့ ကဗျာစပ်တယ်။ အပူပိုင်းနေတဲ့ သူတွေမို့ လမင်းကို မေတ္တာတရားကို အေးမြတယ် ဖွဲ့တယ်။ ခဲပြီး ဖြူဖျော့နေသူတွေအတွက်ကျ ညိုတာ အလှ၊ အဖိုးထား တောင့်တတာ အနွေးဓာတ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆန်းဒေး ၊ ဟောင်ကောင် Stanley အရပ်မှာ…
မြန်မာဆရာဝန်များအသင်းက ကြီးမှူးပြီး သင်္ကြန် စတုဒီသာ ကျွေးတယ်ခင်ဗျ…
ပရိတ်သတ်အတော်များများက စားနိုင်သလောက်ပဲ ပန်းကန်ထဲထည့် …
စားကြွင်းစားကျန် Disposal အမှိုက်တွေကို နေရာတကျစွန့်ပစ်ပေမည့်…
တချို့တွေက အကျင့်မပျောက်သေးတာမို့ ပင်စင်စား ဆရာဝန်အဖိုးကြီးတွေက …
စတု ဒီသာပါမောက္ခ အရီးဒုံ ပြောတာ.. ယုံလိုက်.. ယုံလိုက်…။
ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့ ကားတွေပေါ်ကနေ လည်လည်ထွက်သူတွေက
.သေသေချာချာ ထုပ်ပိုးထားတာမို့ အောက်က လမ်းလျှောက်သူတွေက ကောက်ယူပြီး ဖြည်စားကြတာ
.သာဓု သာဓု သာဓု
ကြာဇံကြော်ကို စပါယ်ရှယ်ကြော်တတ်တယ်။ အချဉ်ရည်ကိုလည်း ကြာဇံကြေ်ာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ အချဉ်ရည် ကောင်းကောင်းဖျော်တတ်တယ်။ အလှူမှာလုပ်အးလိုရင်ခေါ်နော်။